हाम्रो माग पूरा नभएसम्म संसद् चल्न दिँदैनौं : टोपबहादुर रायमाझी (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
‘एमसीसीबारे सरकारले पहिले पोजिसन क्लियर गरोस, देशको हितमा नभएका प्रावधान करेक्सन गर्नुपर्छ’
काठमाडौं, ३१ भदौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई लोभी पापीहरुको गठबन्धनको संज्ञा दिएका छन् । उनले सरकारले दुई महिनासम्म महत्वपूर्ण समय खेर फालेको टिप्पणी गरे ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै रायमाझीले आफ्नो पार्टीले उठाएका माज पूरा नभएसम्म संसद् अवरुद्ध कायमै रहने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन, तबसम्म संसद् अवरुद्ध हुन्छ ।’ उनले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘उहाँलाई त नैतिकताको आधारमा एक सेकेण्ड पनि पदमा बस्ने अधिकार छैन् । हामी त्यस्तो भएर बस्दैनौं ? सभामुख, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएरमात्रै सबै चिज हुन्छ ? विचार र राजनीति नै ठूलो कुरा हो । सांसद र मन्त्री हुने र नहुने त भैरहन्छ नि । हाम्रो हकमा एक दिनपनि नपर्खिकन कारबाहीको सूचना टाँस्ने काम गर्नुभयो, तर एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्दा अन्टसन्ट गर्ने ?’
वर्तमान सरकारले अर्को बजेट ल्याएकोमा पनि उनले दुःखेसो पोखे । उनले भने,‘यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटले जलन भएर अहिले प्रतिस्थापन विद्येयक ल्याईएको छ, विकासका एजेण्डा काट्न मिल्छ ? साथीहरु नाँग्गिदै गएका छन् । कार्यकर्ता थेग्ने, पोषण गर्ने, यस्तो प्रकारको कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याउनुहुन्छ ? देश र जनताको हितमा बजेट ल्याउनुपर्छ । यसले देशको हित गर्दैन ।’ उनले मुलुकमा अब राजनीतिक क्रान्तिका एजेण्डा तत्काल नभएको भन्दै अब विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई बोकेर हिँड्नुपर्ने बताए ।